Ny faran’ny herinandro dia nisehoana vaky trano teny amin’ny faritra Andraharo. Rehefa natao ny fanadihadiana, lehilahy iray no nahiahiana ho nahavita an’izany ka nosamborina avy hatrany. Taorian’ny nahazoana ity tovolahy iray ity no nahatrarana ny namany iray hafa izay mpandray sy mpivarotra ny entana halatra tetsy 67ha ny 6 septambra 2019 maraina. Mbola hita teny aminy ireo entana halatra nangalariny. Samy niaiky ny heloka vitany izy ireo ary nanamafy fa mpiray tendro amin’ny asa ratsy toy izao. Araka ny fampitam-baovao voaray, any am-ponjan’Antanimora izy roalahy no miandry ny fitsarana azy.